Dagaal kharaar oo ka dhacay duleedka Dhuusamareeb | KEYDMEDIA ENGLISH
Dagaal kharaar oo ka dhacay duleedka Dhuusamareeb
Soo laba kacleynta Urur-kii Ahlu-sunna, ayaa la rumeysan yahay in ay salka ku heyso arrimo siyaasadeed, lagana leeyahay u jeedooyin gaar ah.
DHUUSAMAREEB, Somaaliya – Dagaal xooggan oo u dhaxeeya Ciidamada Xoogga Dalka iyo kuwa Galmudug oo is kaashanaya iyo Ciidamo tabacsan hoggaanka Culimada Ahlu-sunna Wal-jamaaca, oo dhawaan dib isku abaabulay ayaa manta ka dhacay degaanka Bohol, oo qiyaastii 30Km dhanka waqooyi ka xiga Dhuusamareeb.
Warar horudhac ah ayaa sheegaya in dagaalka uu dhaliyey khasaare dhimasho iyo dhaawac leh, dad ku sugan Xarunta Maamulka Galmudug, ayaana Keydmedia Online, u sheegay in askar ku soo dhaawacatay dagaalka la dhigay isbitaalka magaalada.
Saraakiisha Ciidamada Dowladdaayaa sheegay in gudaha u galeen degaanka Bohol ee lagu dagaallamay oo ay markii hore ku sugnaayeen ciidamada Ahlu-sunna, halka kuwa Ahlu-sunna dhankooda ay sheegeen in ay iska difaaeen CQS, oo ay xuseen in ay ku soo duulleen.
Hoggaamiyayaasha Ahlu-Sunna Macallin Maxamuud iyo Sheekh Maxamed Shaakir, ayaa todobaadkii hore ku dhawaaqay in ay doonayaan in ay dib u soo ceshtaan degaannadii laga faramaroojiyay billowgii sanadkii hore.
Ahulu-sunna, in ka badan 10 sano ayay ka arriminayeen qeybo ka mid ah Galgaduud, waxaana lagu eedeeyaa in aysan nidaam maamul iyo dowladnimo aysan waligood ka shaqeyn, marka laga yimaado dagaallo ay la galeen Kooxda Al-Shabaab.